Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska Beesha Xawaadle | Warkii.com
Home warkii Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska Beesha...
Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska Beesha Xawaadle
Safaaradda Qatar ee Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah xaruntoda magaalad Muqdisho kula leh Ugaaska Beesha Xawadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugas Rooble, kaas oo ku saabsan arrimo xasaasi ah oo ku saabsan gobolka Hiiran.
Ilo waredyo aad ugu dhaw Safaaradda Qatar ee Muqdisho ayaa Caasimadda Online u xaqiijiyay in kulan muhiim ah uu ka soconayo xarunta Safaaradda ee Muqdisho iyado ujeedka uu yahay in Ugaaska uu kala hadlayo safaaradda waxyabo badan oo khuseya danaha dadka ku nool gobolka Hiraan.
Waxyaabaha kulankaan muhiimka ah uu ugaaska kala hadlayo Safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya Hassan Hamza waxaa ka mid ah mashaariic muhim u ah Bulshad ku dhaqan gobolka Hiran oo ay ka mid yahiin arimaha Fathaadaha oo saameyn balaarn ku yelanayay mudooyinkii dambe dadka deegaanadaas.
Waxyabaha kale ee Ugaaska uu kala hadlayo safiirka Qatar waxaa ka mid ah Mashaariic waxbarsho, mid dhismo oo lagu dhisayo waddooyinka muhiimka ah ee Gobolka, arrimaha Caafimaadka iyo mashaariic kale oo danta dadka Gobolka Hiiran muhiim u ah.
Ilo wareedyad waxey sidoo kale daaha ka rogeen in kulankan muhiimka ah uu isku xirkiisa leyahay Xildhibaan Cabdicasis Saalax Arman oo ka mid ah xildhibanada Federalka ee laga soo doorto Hir-Shabeelle.
Kulankaan muhimka ah wuxuu kusoo aadaya xili dadka gobolka Hiiraan ay u baahan yahin in waxyaabo badan laga gacan siiyo, waxyaabaha ugu weyn ee kulankaan sare u qaadaya muhimadiisa waxaa ka mid ah in looga hadlayo arrimaha Fatahaadaha oo ay mudooyinkii dambe badn ku guryo beeleen, kuwana kaga qaxen Guryahoda, halka qaarkoodna ay wax soo saarka beerahoda saameeyeen.
Safaaradda Qatar waxey muddooyinkii dambe ku hawlaneed gacan siinta dowladda Soomaliya iyadoo sidoo kale gudaha wadanka ka fulisay Mashaariic horumarineed oo dadka Soomaalida waxtar u leh.
Previous articleMadasha Xisbiyada Qaran oo ka hor-timid guddiyada doorashada kadib markii ‘lagu soo daray’ xubno…
Next articleMahdi Guuleed oo weerar ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare
Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, waxeyna aheyd soo dhaweyn heer sare ah. Ra’iisul wasaarahii hore...